သုအိုင်စံ-တလမ်းသွားကုန်စည် = One-Way Trade-Goods | MoeMaKa Burmese News & Media
နေ့တိုင်းနေ့စဉ် …. အသက်ဝင်သွားလာ – နားချိန်ဆိုတာမရှိ
ပေါချောင်ကောင်း ရသမျှ အကုန်စားဟေ့ ဆိုလား….
ပေါချောင်ကောင်း ရသမျှ အကုန်တင်ဟေ့…ဆိုလား….
ခင်ဗျား အလိုလို သိနေလောက်ပါပြီမျာ… ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Poems, သြစတြေးလျ